ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း - Tianjin Jieya Women's Hygiene Products Co.,Ltd
သန့်ရှင်းရေးသုံး လက်သုတ်ပုဝါ/သန့်ရှင်းရေး Pads
TIANJIN JIEYA အမျိုးသမီး တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေး ထုတ်ကုန်များ CO.,LTD.
Tianjin Jieya အမျိုးသမီးတစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးထုတ်ကုန် Co., Ltd.1996 ခုနှစ်တွင်တွေ့ရှိခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ဘောင်းဘီအနှီးအတွက် နေ့စဥ် 200,000 pcs/day ရှိသည့် တရုတ်နိုင်ငံတွင် အကြီးဆုံးထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်တစ်ခုရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့တင်ပို့သည့်နိုင်ငံများမှာ အိန္ဒိယ၊ တောင်ကိုရီးယား၊ ကင်မရွန်း၊ ယူဂန်ဒါ၊ ဘိုလီးဗီးယား၊ ဥရုဂွေး၊ အစ္စရေး၊ အာမေးနီးယား စသည်ဖြင့် အကန့်အသတ်မရှိ ပါဝင်ပါသည်။
Tianjin Jieya အမျိုးသမီးတစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးထုတ်ကုန် Co., Ltd.found@1996သန့်ရှင်းရေး pads(လက်သုတ်ပုဝါ) ၊ panty liner ၊ menstrual panty ၊adult diapers ၊adult pants diaper(adult pull up diaper) ၊ underpad နှင့် pet pad တို့ဖြင့် ISO နှင့် CE လက်မှတ်ရရှိထားသော အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် pad များ။
၎င်းသည် Tianbao စက်မှုပန်းခြံ၊ Baodi ခရိုင်၊ Tianjin၊ CHINA တွင်တည်ရှိပြီး သန့်ရှင်းရေးသုံးလက်သုတ်ပုဝါ4ခု၊ pantyliner 1 ၊ အရွယ်ရောက်ပြီးသူအနှီး 1 ၊ အရွယ်ရောက်ပြီးသူဘောင်းဘီ 1 နှင့် underpad (pet pad) အပါအဝင် ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း 8 ခုရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ဘောင်းဘီအနှီးနှင့် Pad အတွက် နေ့စဉ် 200,000 pcs/ရက်၊ Adult Diaper/Menstrual Panty အတွက် 200,000 pcs/ရက် နှင့် Sanitary Napkins အတွက် 340,000 pcs/day ဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံတွင် အကြီးဆုံးထုတ်လုပ်မှု စွမ်းရည်တစ်ခုရှိသည်။ပြီးတော့ အလုပ်သမား ၅၀ ကျော်ရှိတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် သုံးစွဲသူများအား ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသီးသန့် စောင့်ရှောက်မှုပေးကာ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်မျိုးစုံကို ပေးဆောင်ရန်၊ ဒီဇိုင်းများ၊ ထုတ်လုပ်မှုများနှင့် အရောင်းအ၀ယ်များကို ပေါင်းစပ်ပေးခြင်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ သုံးစွဲသူများနှင့် အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးနှင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သောစျေးနှုန်းများကို ပေးဆောင်ခြင်းဖြင့် Win Win လုပ်ငန်းဆက်ဆံရေးကို ထူထောင်ရန်ဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏လေးစားဖွယ်ဖောက်သည်များရှိသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် 2014 ခုနှစ်မှစတင်၍ တင်ပို့နေပြီး ကျွန်ုပ်တို့တင်ပို့သည့်နိုင်ငံများမှာ အိန္ဒိယ၊ တောင်ကိုရီးယား၊ ကင်မရွန်း၊ ယူဂန်ဒါ၊ ဘိုလီးဗီးယား၊ ဥရုဂွေး၊ အစ္စရေး၊ အာမေးနီးယားနှင့် အခြားနိုင်ငံများအထိ ပါဝင်ပါသည်။သင့်တစ်ဦးချင်းအလိုက် OEM အမှတ်တံဆိပ်ပက်ကေ့ချ်တွင် ကြွယ်ဝသော အတွေ့အကြုံလည်းရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် OEM အော်ဒါများကို ကြိုဆိုလျက်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အမှတ်တံဆိပ်များကို ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစျေးကွက်များတွင် ဖြန့်ဝေရန် တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ အေးဂျင့်များကိုလည်း ရှာဖွေနေပြီး၊ သေချာသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးကူညီမှုကို ပေးဆောင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများနှင့် စီးပွားရေးဆက်ဆံရေးအတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုကို ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံဗျူဟာများထဲမှတစ်ခုအဖြစ် အမြဲတမ်းထည့်သွင်းစဉ်းစားပါသည်။အကောင်းဆုံးစက်၊ အလွန်ကောင်းမွန်သောနည်းပညာ၊ အတွေ့အကြုံရှိသော အလုပ်သမားများ၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှု၊ မဆုတ်မနစ်သော R&D တို့ဖြင့် အရည်အသွေးပြည့်ထုတ်ကုန်များကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ကုန်ကြမ်းများ၊ အွန်လိုင်းထုတ်လုပ်မှုများနှင့် ကုန်ချောထုတ်ကုန်များမှ အရည်အချင်းပြည့်မီသော QC စစ်ဆေးခြင်း။ဖောက်သည်စောင့်ရှောက်မှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ပထမဦးစားပေးဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများတွင် ထူးချွန်စေရန် ဖောက်သည်တစ်ဦးမှ တစ်ဆင့်ပေးပို့သော အပြုသဘော သို့မဟုတ် အနုတ်လက္ခဏာတစ်ခုစီကို ကျွန်ုပ်တို့ ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် OEM အော်ဒါများကို ကြိုဆိုလျက်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အမှတ်တံဆိပ်များကို ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစျေးကွက်များတွင် ဖြန့်ဝေရန် တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ အေးဂျင့်များကိုလည်း ရှာဖွေနေပြီး၊ သေချာသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးကူညီမှုကို ပေးဆောင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
လိပ်စာ- အမှတ် ၆ Baofu လမ်း၊ Tianbao စက်မှုဇုန်၊ Baodi ခရိုင်၊ Tianjin၊ တရုတ်
သန့်ရှင်းရေးသုံး လက်သုတ်ပုဝါ လျှို့ဝှက်ချက်...
အော်ဂဲနစ် ဂွမ်းသန့်ဆေးပြား/ သန့်ရှင်းရေးသုံး အိပ်ယာ...
တရုတ်နိုင်ငံမှ သန့်ရှင်းရေးသုံး လက်သုတ်ပုဝါဖြင့် ထုတ်လုပ်...
Disposable Underpads ရွေးချယ်ရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း
Hot Products များ, ဆိုက်မြေပုံ,AMP မိုဘိုင်း
Lady Pads, Cotton Sanitary Pad, Sanitary Pad 245mm, Negative Ion Sanitary Napkin, Female Sanitary Pad, Soft Women Sanitary Towel,